Andriamasinavalona | Forums malgaches - KoolSaina.com
Accueil › Forums › Madagascar – Coutumes, croyances, histoire › Andriamasinavalona
5 sujets de 6 à 10 (sur un total de 33)
22/09/2009 à 8 h 33 min #21152
Misaotra be dia be @ valin-tenin’se fa efa fantatro avokoa izany satria manana tetiharana aho ny @ razambeko.Ny zavatra hitadiavako fanampiana dia mba te hahalala raha misy fikambanan’ny terak’i Andriamasinavalona eto Frantsa na tsia, raha eny dia mna mila ny site web na numero de telephone na adressen-nry zareo aho, misaotra anareo mialoha izay afaka mitondra fanampiana ny @ zay.
Dr ANDRIANALY dia Andriamasinavalona avy eo Sambaina Manjakandriana zanak’ ANDRIANANGALY taranak’ Andriampanarivofoinamanjaka Mpanjakan’i Fanongoavana nanambady ny anabavin’Andriamasinavalona dia RANAVALOTSIMITOVIAMINANDRIANA. Iray razambe amin-dRazafindrahety lasa Ranavalona III ihany avy amin’ Andriantsimianatra rainy tompom-bodivona tamin’ Amoronkay ( Vakio Ny Firaketana fa tena encyclopédie vita ho azy io ka tokony ho numériser-na @ izay)
10/12/2010 à 13 h 40 min #22303
Toa tsy misy aloha izany fikambanan’ny Andriamasinavalona na Zazamarolahy izany. Tsy mbola naheno aho.
Ny antony angamba dia ara-tantara? Tamin’ny Andron’ny faha-Mpanjaka vavy dia natahoran’ny Praiministra sao handrombaka fahefana angaha? Teo hono no nahatonga ny fitenenana hoe « andrian-dreraka », satria nesorina taminy ny « privilèges ». Eny fa na tamin’ny andron’ny faha-Mpanjaka lahy aza dia efa naparitany nomeny vodivona eran’ny Madagasikara izy ireo. Izany angaha no hoe zarazarao hanjakana? Ny Andriana hafa anefa nomena vohitra, satria tsy atahorana.
Anisan’ny nomasohin’ny Mpanjana-tany koa dia mba tsy hiverenan’ny Royauté. Iza anefa no éligible raha hisy izany? Ny Zazamarolahy sy ny Andriamasinavalona. Tratran’ny hazalambo mihaja izy ireo.
Raha fintinina dia raha ny tantara dia « normal » raha tsy misy ny fikambanana.
11/12/2010 à 9 h 40 min #22305
Hay ve ry mimi tsy misy ny fikambanana Andriamasinavalona na Zazamarolahy e! Ny tenako aloha efa nahita e, ary fantatro ireo mpikambana.
11/12/2010 à 13 h 13 min #22306
afaka mba manome information ve enao momba azy iero, num de tel sns?…
11/12/2010 à 18 h 42 min #22307
Dia hamoaka anarana sy n° de tèl eto aho izany ?